မြင်သူတိုင်းငေးရလောက်အောင် သွယ်လျလှပတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားနဲ့ လှရက်လွန်းနေတဲ့ ချိုမဒီသွင်ရဲ့ ပုံရိပ်များ…. – Cele Cupid
မြင်သူတိုင်းငေးရလောက်အောင် သွယ်လျလှပတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားနဲ့ လှရက်လွန်းနေတဲ့ ချိုမဒီသွင်ရဲ့ ပုံရိပ်များ….
EverBest M | September 21, 2021 | Celebrity | No Comments
သွယ်လျ တဲ့ အမိုက် စား ခန္ဓာကိုယ်လေး ကို ပိုင်ဆိုင်ထား တဲ့ တက်သစ်စ ဆက် ဆီ မော်ဒယ်လ် ချိုမဒီသွင် ကိုသိ ကြမယ် ထင်ပါ တယ်။ ဆွဲမက်ဖွယ် ရင်သပ် ရှု မောစရာ အမိုက် စား ပုံရိပ်လေးတွေ နဲ့ ပုရိသတွေရဲ့ရင် ကို ဆွဲဆောင်ညို့ယူ ထားတဲ့ အလန်းစား မော် ဒယ် သရုပ်ဆောင်လေး ဖြစ် ပါ တယ် ။ သွယ်လျ ပြေ ပြစ် တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ အတူ လှပကြည်လင် တဲ့ အသားအ ရေ ကိုပါ ပိုင်ဆိုင် ထားပြီး ဆက်ဆီကျ တဲ့ သူမရဲ့ အမိုက် စား ပုံတွေ နဲ့ ညို့အားပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင် နိုင်သူလေးလည်းဖြစ်ပါ တယ်။
သူမရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ် နဲ့ ဆက်ဆီ ကျ ကျ ဗီဒီယိုလေးတွေ ကို လူမှုကွန်ယက်ဖေ့ဘွတ် ပေါ်တွင် အများဆုံး တင်လေ့ ရှိတာလည်းတွေ့ရပါ တယ်။ လတ်တ လော မှာတော့ သူ မ ရဲ့ အမိုက်စား အလှတရား တွေနဲ့ ညို့ယူဖမ်းစားထား တဲ့ အလန်းစား ပုံလေး ကိုဖော်ပြထား တာတွေ့ရပါ တယ်။ ပုံလေး ဟာ ကြည့်ရှုသူ တွေများပြားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပုရိသတွေ အများဆုံး ဝန်းရံခြင်းခံနေရတာ လည်းဖြစ်ပါ တယ်။
ယခု အခါမှာ တော့ ချိုမဒီသွင် တစ်ယောက် ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိ ရိုက်ထား တဲ့ ပုံတွေကို တင်ပေးလာတာပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။သူမရဲ့ အမိုက် စား ခန္ဓာကိုယ် အလှက တော့ မြင်သူတိုင်း ငေးလောက် အောင်ကို ညို့ယူဖမ်းစား နေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါ တယ်။
Source & Photo Credit : Cho Madi Thwin Facebook Account
သြယ္လ် တဲ့ အမိုက္ စား ခႏၶာကိုယ္ေလး ကို ပိုင္ဆိုင္ထား တဲ့ တက္သစ္စ ဆက္ ဆီ ေမာ္ဒယ္လ္ ခ်ိဳမဒီသြင္ ကိုသိ ၾကမယ္ ထင္ပါ တယ္။ ဆြဲမက္ဖြယ္ ရင္သပ္ ရႈ ေမာစရာ အမိုက္ စား ပုံရိပ္ေလးေတြ နဲ႔ ပုရိသေတြရဲ့ရင္ ကို ဆြဲေဆာင္ညိဳ႕ယူ ထားတဲ့ အလန္းစား ေမာ္ ဒယ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ေလး ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ သြယ္လ် ေၿပ ျပစ္ တဲ့ ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ အတူ လွပၾကည္လင္ တဲ့ အသားအ ေရ ကိုပါ ပိုင္ဆိုင္ ထားၿပီး ဆက္ဆီက် တဲ့ သူမရဲ့ အမိုက္ စား ပုံေတြ နဲ႔ ညိဳ႕အားျပင္းျပင္း ဆြဲေဆာင္ နိုင္သူေလးလည္းျဖစ္ပါ တယ္။
သူမရဲ့ အမိုက္စား ပုံရိပ္ နဲ႔ ဆက္ဆီ က် က် ဗီဒီယိုေလးေတြ ကို လူမႈကြန္ယက္ေဖ့ဘြတ္ ေပၚတြင္ အမ်ားဆုံး တင္ေလ့ ရွိတာလည္းေတြ႕ရပါ တယ္။ လတ္တ ေလာ မွာေတာ့ သူ မ ရဲ့ အမိုက္စား အလွတရား ေတြနဲ႔ ညိဳ႕ယူဖမ္းစားထား တဲ့ အလန္းစား ပုံေလး ကိုေဖာ္ျပထား တာေတြ႕ရပါ တယ္။ ပုံေလး ဟာ ၾကည့္ရႈသူ ေတြမ်ားျပားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ပုရိသေတြ အမ်ားဆုံး ဝန္းရံျခင္းခံေနရတာ လည္းျဖစ္ပါ တယ္။
ယခု အခါမွာ ေတာ့ ခ်ိဳမဒီသြင္ တစ္ေယာက္ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိရွိ ရိုက္ထား တဲ့ ပုံေတြကို တင္ေပးလာတာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။သူမရဲ့ အမိုက္ စား ခႏၶာကိုယ္ အလွက ေတာ့ ျမင္သူတိုင္း ေငးေလာက္ ေအာင္ကို ညိဳ႕ယူဖမ္းစား ေနတာအမွန္ပဲျဖစ္ပါ တယ္။
ယဉ်ယဉ်လေးနဲ့ ရှု့မငြီးအောင် ခေတ်ဟောင်းဒီဇိုင်းလေးတွေနဲ့ အလှကြီးလှရက်လွန်းနေတဲ့ မယ်လိုဒီ….
GYM မှာနေမထိ ထိုင်မထိဖြစ်လာလို့ ပြေးဖက်လိုက်တဲ့ မတ်မတ်သင်ဇာရဲ့ အကြမ်းစား ဗီဒီယို
နန်းဆုဦးက သူမရဲ့ မွေးနေ့ အမှတ်တရ အဖြစ် ဦးကျော်သူ တို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)သို့ ၉ သိန်းကျပ် လှူဒါန်းခဲ့